Lehilahy Nitoraka Baomba Ny Seranam-Piaramanidin’i Beijing: Mpampihorohoro sa Niharam-boina ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Aogositra 2013 3:28 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, ភាសាខ្មែរ, Français, Español, македонски, English
Lehilahy iray mandeha amin'ny seza natokana ho an'ny malemy, tezitra noho ny haratsin'ny fandraisan'ny mpitandro filaminana azy, no nanapoaka baomba tao an-tseranam-piaramanidina Iraisam-pirenena any Bejin ny harivan'ny 20 Jolay 2013 teo, tsy nisy naratra afa-tsy izy irery ihany
Nolazain'ny haino aman-jery ao an-toerana fa i Ji Zhongxing ilay lehilahy, izay nanazava fa vokatry ny kapoka nataon'ny mpitandro filaminana azy tao an-tanànan'i Dongguan ao atsimo atsinanan'i Shina tamin'ny 2005 io fahalemeny io.
Nanontanian'ny mpanao gazety iray avy amin'ny tranonkalam-baovao Nandu ny mpisolovava roa izay niaro an'i Ji tamin'ny 2006 izay nanamarina fa nokapohan'ny mpitandro filaminana fito na valo taminà tapa-by i Ji tao Houde, tanàna manodidina an'i Dongguan, satria nanao moto-taxi tsy ara-dalàna izy. Tsy azo tsaboina intsony ny hazondamosiny noho io kapoka io, nefa ny mpitandro filaminana ao an-toerana milaza fa ratra vokatry ny fianjerany tamin'ny moto io. Na dia nisy aza ny vavolombelona nanameloka ny mpitandro filaminana dia nanameloka an'i Ji ary nomba ireo mpitandro filaminana ihany ny fitsarana tao an-toerana tamin'ny 2008.
@chenshimanhua, mpiserasera amin'ny Sina Weibo, nampiakatra sary maneho ny hadisoam-panantenan'i Ji Zhongxing.
Noterena handoa ny saram-pitsarana i Ji ka nahatonga azy hitrosa. Nandeha tany Bejing tany amin'ny Kaomisiona an-tampony momba ny politika sy ny lalàna ao amin'ny Antoko Kaominista Shinoa izy mba hangataka ny famerenana ny fitsarana azy.
Nomen'ny mpitandro filaminana tany Houde 100.000 yan (15.000 dolara amerikana) i Ji ho takalon'ny fisintonany ny fitakiany an-tsoratra tamin'ny 2010.
Mpampihorohoro sa niharam-boina ?
Nanohana an'i Ji ny ankamaroan'ny resaka ao amin'ny haino aman-jery sosialy Shinoa, mandray azy ho niharan'ny tsy fahamarinana ara-politika sy ara-tsosialy. Nanoratra ny zavatra niainanay tao anaty bilaogy hatramin'ny 2006 i Ji, naverin'i Feng Chingyang (@风青杨V) novakiana izany ary nofaranany hoe :
Voavakiko ny bilaogin'i Ji ary hitako tao fa voakapoka sy nanjary malemy izy noho ny nanaovany moto-taxi tsy ara-dalàna. Nidiran-trosa ny fianakaviany ary tsy nahazo onitra taona maro aty aorian'ny fangatahana. Efa maty ny ray aman-dreniny ary maty niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny momba azy. Tsy ekeko ny fomba nataon'Atoa Ji hialàny amin'ny fahoriany. Kanefa, raha ohatra ka tsy tiantsika hisy Atoa Ji intsony eto amin'ity firenena ity, dia tokony dinihana ifotony ny olana. Olona ara-dalàna izy tany am-boalohany, inona no nahatonga azy ho malemy ?
Na dia izany aza, inoan'ny sasany fa ny filaminam-bahoaka no laharam-pahamehana. Toy ny nosoratan'i Yin Zhe (@凝哲同学), mpiasan'ny haino aman-jery iray :
Mifangaro be ihany ny fomba fijerin'ny Shinoa. Tsy manameloka ireo izay misetrasetra imasom-bahoaka ireo mpitari-kevitra be mpihaino. Ankalazain'izy ireo ho toy ny mahery fo aza ilay jiolahimboto satria tsy nandratra ny hafa. Tsy miraharaha ny filaminam-bahoaka ny haino aman-jery satria variana manangona ireo karazana porofo mba hamadihana ireo jiolahimboto ho toy ny niharam-boina. Fa inona no manjo ny fiaraha-monina misy antsika ?… Nahoana no hafa mihitsy ny fihetsiny nandritra ilay fanafihana taminà baomba tany Boston ?
Fa tsy dia naresaka loatra tao amin'ny aterineto ny momba ny fandriam-pahalemana satria nasain'i Ji nihataka daholo ny manodidina azy mialohan'ny nanapoahany ilay baomba. Narovan'i [zh] Zhao Xiao (@赵晓), mpampianatra ao amin'ny Oniversite momba ny Teknolojia any Beijing i Ji:
Nandany fotoana 10 minitra nanamarinana ny manodidina azy i Ji Zhongxing talohan'ny nanapoahany ilay baomba, izany no antony namparatra azy irery. Olona tsotra be izy. Iza amin'ity firenena ity no sahy hijoro sy hiteny hoe: marina kokoa noho izy aho ?
Sary politikan'i @Badiucao. Ji: rehefa tsy misy ny fahamarinana, tadiaviko ny ahy.
Naverin'i @xiangrenli [zh] mpanoratra tantara filalao ao amin'ny TV :
Nomen'i Ji Zhongxing sehatra ny raharaha mikasika ny lalàna eto amintsika , saingy tsy nomen'ny fitsarana rariny izy. Tia mijery sy mankafy ilay mpamono olona mamono mpikatsaka fiovàna ny ankamaroan'ny Shinoa. Misy aza dia mividy mofo misy piti-drà [ sariohatra ao amin'ny bokin'i Lu Xun, Fitsaboana izay hinoan'ny olona fa manasitrana ny aretin'ny havokavoka io mofo io ] Tsy misy misaina izany olana izany ary tsy i Ji Zhongxing no ho farany [ mamono tena aminà baomba]
Zarain'i [zh] @yourwisdom ny fomba fijeriny mitovy amin'izany :
Nataon'i [Ji] takalon'ny tombontsoam-bahoaka ny ainy. Tsy mitsahatra ny manao ratsy sy mampitsiry ny ratsy ny rafitra ara-politika. Mandra-pahoviana no ho ao ambany fifehezana ny filaminam-bahoaka ?
“South of the sea” (@海之南) dia nino [zh] fa mbola be ny baomba hanaraka :
Izay rehetra niatrika io tsy fahamarinana io dia baomba misoko mangina avokoa! Mba tsy hampipoaka ireny baomba ireny dia tokony hotadiavina sy holazaina ny hadisoana. Làlana tsy mitondra mankaiza ny fifehezana fandriam-pahalemana amin'ny ara-politika sy ny famoretana.